Uye waba kunye ixesha elide kwaye ufumene i-posterity, kubonakala kuwe ukuba yonke into ephela kwindalo yakho ixhomekeke kwindlela eqhelekileyo: iiplanethi zijikeleza ilanga, iinkwenkwezi zikhanya ngokukhanya kwaye i-comets ihamba ngaphandle kokuthinta nantoni na ngomsila wawo womlilo.
Ngokukhawuleza, njengamanzi abilayo kwisandla sakhe esinqabileyo: "Andifuni ukuhlala nawe, ndidiniwe konke ..." Indoda ifuna ukuhamba. Ngokusoloko, iintlobo ezininzi zeendlela zokuphendula kwabafazi:
Inkxwaleko: yintoni na ndiya kuyenza ndodwa yedwa?
Intukuthelo: Ndinike iminyaka engcono kakhulu.
Isenzo esiphambene nxamnye: Hamba uye apho ufuna khona, andinandaba.
Ewe, umbuzo oyintloko uvela: "Kutheni?". Kutheni ehamba? Kutheni oku kwenzeka kum? Kutheni ndizange ndiphulaphule (okanye ndiphulaphule) umama kwaye nditshata naye? Kutheni wayeka ukundithanda, kodwa ngokukhawuleza wayengandithandi nonke? Iingxabano zemibuzo, izikhalazo ezingachazwanga kwaye, ngokubaluleke kakhulu, ukungaqhelekanga kakubi kwezinto ezenzekayo kushiye isizathu esikhulu sokungavumelani kobudlelwane bosapho. Esi sizathu, eqinisweni, kwintsapho nganye kunye neyakhe ayifuni ngokukhawuleza, kodwa iqokelela kwiileta, ngokwegama okanye ukungabikho kwazo, izenzo okanye ukushiya.
Ukuba indoda ingashiyi enye (enye ivele ingekho), ukuba ingashiyi ngenxa yokuba unomnye (njengokuba nayo ingekho), amathuba okugcina ihlabathi lakho libe ngaphezulu.
Amadoda, njengesondo esomeleleyo, ngokweengcaciso zawo, ngokungapheliyo kufuneka abonise ukuqina nokugweba kuyo yonke into, ukuvavanya imeko leyo kwaye angakhange amemezele, ebona inqatha, i-cockroach ekhukhulayo iphuma phantsi kwekhitshini, kodwa ithobile kwaye idlulise i-parasite ngepompo. Kule minyaka siye sajwayele ukulinda izigqibo ezingenangqiqo kunye nokulinganisela ezivela kubayeni bethu, kulula kakhulu kwaye kunomdla ukuzinyamekela uxanduva kwaye, emva kweeyure ezintathu ukungaqiniseki ukuba yeyiphi ingubo yokugqoka (kungakhathaliseki ukuba kuphi), uthembele kwisigqibo somntu oqinileyo (kunye nomzuzu wokugqibela ukutshintsha iimpahla). Ngokumalunga nokukhethwa kwendawo yokuhlala, imoto, ibhanki yenkxaso yemali ayiyikusho.
Kwaye ngaba uyazi ukuba ukukrazula okuqhelekileyo kunye nokumemeza kwengane kunakho ukuthatha indoda ngaphandle kwemali emihlanu ukuya kwemizuzu engama-10 kwaye ibeka ingozi yakhe ekuhloliseni imeko. Kuba abaninzi abantu, umnqweno wokushiya intsapho iphefumlelwe ngumfazi wakhe. Umoya wakhe wemvakalelo unomfazi ongakumbi, kuba sikwazi ukuzikhukhumeza, ukumemeza, ukubetha ngeenyawo, ngoko nje sitsho umhlobo kwaye konke kulungile kwakhona. Indoda kufuneka ikwazi ukugcina amava akhe kwaye ayiyikuzilimaza ngokwasemzimbeni ngokwasemzimbeni ngendlela yokwahlukana kobudlelwane obude obuzinzile.
Uvile: "Andifuni ukuhlala nawe." Emva kweentshukumo zemvakalelo, iminqweno (masiyike okanye siyiqhube) ixhaswe, yedwa. Kufuneka uqonde okokuqala ukuba unokubuya ekhaya uze ungalindeli, uchazela abantwana imihla yonke apho uPapa kunye nalapho efika khona, musa ukutshiza iikhati zakhe uze uhlambe iingubo zakhe, ungaziveki kwigumbi elilandelayo lilele embhedeni, kungekhona ukuva ebusuku ubusizi bekhompyutha.
Umnqweno wakho, uhlambulule izikhalazo kunye nezikhalazo, ukwandiswa ngothando, mhlawumbi udibanise uthando luya kukuxelela indlela yokuthetha nokuqonda umyeni wakho, kwaye kufuneka ukhulume ngaphandle kokusongela, kunye neinyembezi neziqalekiso. Emva koko, baninzi bahlala ndawonye, ​​iintsuku ezininzi zokuzalwa kunye nobusuku boNyaka obutsha, kodwa into encinci! Khangela iifilikhi zasekhaya zakho, iifoto, khumbula indlela oziva ngayo kunye nabantwana, emva kokuba bezalwe. Yonke ubomi, kunye nemithetho yayo emincinci, i-monotony yansuku zonke, ishiya umgca ekubonweni kwakho komnye nomnye, ngoko "hla mbulula" - uye kwenye indawo, hamba kunye.
Yaye khumbula, akukho mntu emhlabeni onjengawe, uyingqayizivele kwaye uyingqayizivele, mazise ngaye.
Ubudlelwane nomyeni wangaphambili emva komtshato
Ukutshatyalaliswa komtshato phakathi kwabatshatileyo
Iipropati ezisebenzayo ze-badjan
I-stervous nervous: izizathu, iimpawu
Indlela yokuphatha i-sinusitis ekhaya
Ukunikela kwesandla nentliziyo